Hotely ranomandry eto an-tany raha te hanana traikefa hafa | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | zavatra ilaina, General, Ocio
Efa nieritreritra ny hijanona ao amin'ny a ice Hotel? Heverinay fa hevitra tsara io, fomba iray hankafizana traikefa tena hafa, ao amin'ny hotely ambanin'ny zero, voahodidin'ny ranomandry ary manao hetsika hafa. Satria ao amin'ireo hotely ranomandry ireo dia tsy voafetra ny mamela anao hatory ao anaty igloo izy ireo, fa mihoatra lavitra noho izany, fanangonana traikefa hiainana.
ny hotely ranomandry Tsy fahita izy ireo, indrindra satria mila fepetra sasany hotehirizina, ka ny ankamaroany dia tsy mijanona misokatra mandritra ny taona, fa amin'ny ririnina ihany. Na eo aza izany, misy maro eran'izao tontolo izao izay mety hahaliana tokoa, koa manorata sao misy akaiky anao.
1 Igloo Village Kakslauttanen any Failandy
2 De Glace any Québec, Kanada
3 Ice Hotel any Jukkasjärvi, Suède
4 Snow Village any Kittilä, Failandy
5 Balea Lac Ice any Romania
6 Hotel Sorrisniva Igloo any Norvezy
7 Village Igloo Blacksheep any Macto-la-Plagne, Frantsa
8 Kirkenes Snowhotel any Sor-Varanger, Norvezy
9 Hotely Igloo ao Grandvalira, Andorra
Igloo Village Kakslauttanen any Failandy
Ity trano itoerana ity dia toa iray amin'ireo manintona indrindra any Lapland rehetra. Mazava ho azy, tsy isan'andro dia afaka mahita Jiro Avaratra mandry eo am-pandriana ianao ao anaty igloo noforonina tamin'ny lanezy. Ireto fonenana ireto dia vita amin'ny igloos misaraka miaraka amin'ny tafo fitaratra ho fankasitrahana ny fahitana an'io lanitra io ary tsy ho tara amin'ny jiro avaratra. Eo akaiky eo ny tanànan'i Santa Claus, hitsidihana azy, ary misy hetsika hafa koa tanterahina, toy ny ski na fanjonoana, mazava ho azy, eo ambonin'ny ranomandry.
De Glace any Québec, Kanada
Ity hotely ranomandry ity no malaza indrindra any Quebec, ary folo minitra monja avy eo amin'ny tanàna. Hotely tsy mampino ity, satria isan-taona rehefa tonga ny hatsiaka dia namboarina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary misokatra hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny faran'ny volana martsa, rehefa tonga ny lohataona. Ny natiora dia avela fotsiny hanaraka ny làlany ary hampitsonika ny hotely. Ny lohahevitra sy ny fomba fanaingoana ny trano fandraisam-bahiny ao anatiny dia novolavolaina, ka samy hafa ny vanim-potoana tsirairay. Afaka mahita ao ianao a trano fiangonana hankalazana fampakaram-bady mahatalanjona sy ranomandry. Ny ambiny dia tsy maintsy hita isan-taona.
Ice Hotel any Jukkasjärvi, Suède
Ity trano fandraisam-bahiny any Suède ity no hotely voalohany misy ranomandry naorina 25 taona lasa teo ho eo izay. Manakaiky ny Faribolana Arctic izy io ary manana ny iray amin'ireo fananganana ranomandry lehibe indrindra. Ny zava-drehetra dia vita amin'ny ranomandry, na ny fandriana aza, izay ranomandry rakotra volon'ondry hatoriana. Ao anatiny dia ho eo amin'ny degre dimy minus isika hitazonana ny ranomandry ary ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia afaka mankafy sary sokitra ephemeral noforonin'ireo mpanakanto manamboatra ranomandry ianao hahafinaritra ny vahiny.
Snow Village any Kittilä, Failandy
Ity hotely ity dia ao amin'ny Lapland Finnish ary izy io dia toeram-ponenana naorina toy ny villa, miaraka amin'ny tionelina misy jiro izay mitondra mankany amin'ny faritra velona indrindra. Trano fisakafoanana sy fisotroana ranomandry ary na ny kliobanao manokana aza. Misy sauna any ambanin'ny tany ao anaty efitrano iray izay hafanaina ho an'ireo izay lasa mangatsiaka loatra.
Balea Lac Ice any Romania
Tsy ny hotely ranomandry rehetra dia any Failandy, ary ity no iray voalohany avy any Eropa Atsinanana. The Balea Lac Ice, hotely ranomandry akaikin'ny Farihin'i Balea. Androany dia trano fandraisam-bahiny iray izay tsy ahafahana mijanona eo ambonin'ny ranomandry ihany, fa koa manana tehezan-ski, trano fisakafoanana ranomandry, bara ary trano fiangonana. Isan-taona dia natsangana aingam-panahy avy amin'ny foto-kevitra hafa, mba hanolotra zava-baovao ho an'ny vahiny foana.
Hotel Sorrisniva Igloo any Norvezy
Ao amin'ny amoron'ny renirano AltaAny Norvezy dia ho hitanao ity hotely ity. Manolotra tsiambaratelo bebe kokoa ity trano fandraisam-bahiny ity, tsy lehibe toa ny hafa izy io fa nahasarika manokana. Amin'ny maraina dia azonao atao ny mankafy ny sauna hamindroana, ary mandritra ny andro dia hetsika maro no tanterahina, toy ny fitsangatsanganana amina lanezy na amin'ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny serfa.
Village Igloo Blacksheep any Macto-la-Plagne, Frantsa
Satria tsy ny rehetra no afaka mamatsy vola ny dia any Finlandia na any Alaska, manana sosokevitra vitsivitsy ihany koa izahay eo akaiky eo. Ity hotely ity dia any Frantsa, any amin'ny faritr'i Savoie. Mahafinaritra ary tanàna mahafinaritra vita amin'ny igloos.
Kirkenes Snowhotel any Sor-Varanger, Norvezy
Any Norvezy, eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Russia, no misy an'i Kirkenes. Afaka misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana mijery ny fjords ianao, tonga ao amin'ny seranam-piara-manidina silety husky ary mankafy ny jiro avaratra. Tontolo iray manontolo misy traikefa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay sokirin'ny mpanakanto manam-pahaizana isan-taona.
Hotely Igloo ao Grandvalira, Andorra
Izany no hotely ranomandry akaiky indrindra izay ho hitantsika, ary any Andorra io. Tolo-kevitra kely izy io, satria efitra enina monja no misy azy, nefa tsy isalasalana fa ampidirintsika izy satria io no tolo-kevitra akaiky indrindra ananantsika. Afaka matory anaty gony sy volom-borona ao amin'ny efitrano misy ranomandry misy endrika sokitra ianao. Tsy ratsy velively hanombohana ny traikefa amin'ny hotely ranomandry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Hotely ranomandry eto an-tany raha te hanana traikefa hafa
Trano fandraisam-bahiny 5 any Paris